အီကွေဒေါနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်တစ်ခု၌ ပဋိပက္ခတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးသူ ၆၈ ဦးထိမြင့်တက် - Xinhua News Agency
အီကွေဒေါနိုင်ငံ Guayaquil ဆိပ်ကမ်းမြို့ရှိ Litoral Penitentiary အကျဉ်းထောင်ရှေ့တွင် ထောင်တွင်းအခြေအနေအားသိနိုင်ရန် စုံရုံးရောက်ရှိလာသော အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်များကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကွီတို ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီကွေဒေါနိုင်ငံ Guayaquil ဆိပ်ကမ်းမြို့ရှိ Litoral Penitentiary အကျဉ်းထောင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် ၆၈ ဦးထိ မြင့်တက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အီကွေဒေါနိုင်ငံရှေ့နေချုပ်ရုံးက နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းပဋိပက္ခတိုက်ခိုက်မှုများသည် သောကြာနေ့ ညပိုင်း နှင့် စနေနေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ အစောပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ ၅၈ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၁၂ ဦးရှိကြောင်း အီကွေဒေါရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် Guayas ပြည်နယ်အစိုးရ၏ ယခင်က ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။
ယင်းထောင်ဆူမှုသည် အကျဉ်းထောင်၏ အဆောင် အမှတ်-၂ တွင် စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဖောက်ခွဲမှုများ ၊ ဓားကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် အိပ်ယာခင်းများမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းများအပါအဝင်
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် အကျဉ်းသား ၇၀၀ ခန့် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုများသည် အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်နှစ်ခုအကြား အားပြိုင်ကြရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
အီကွေဒေါနိုင်ငံသမ္မတ Guillermo Lasso က အခြေအနေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် လုံခြုံရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း တွစ်တာ၌ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
အီကွေဒေါနိုင်ငံရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းဂဏများအကြား ပဋိပက္ခတိုက်ခိုက်မှုများသည် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း နှင့် ယခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော အကျဉ်းထောင်အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်း သေဆုံးသူ ၃၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
Guayaquil မြို့ရှိ Litoral Penitentiary အကျဉ်းထောင်တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အခြားထောင်ဆူပူမှုတစ်ခုတွင် သေဆုံးသူ ၁၁၈ ဦးရှိခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အီကွေဒေါနိုင်ငံသမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး ထောင်ဆူမှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းထောင်ဆူမှုကြောင့်ပင် အီကွေဒေါနိုင်ငံသမ္မတက ပဋိပက္ခများငြိမ်းသက်နိုင်ရန် နိုင်ငံ၏ အကျဉ်းထောင်စနစ်တွင် ရက်ပေါင်း ၆၀ တိတိ နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
QUITO, Nov. 13 (Xinhua) — The death toll from the clashes at the Litoral Penitentiary in the Ecuadorian city of Guayaquil has risen to 68, the State Attorney General’s Office reported on Saturday.
The clashes occurred on Friday night and early on Saturday and left an initial balance of 58 dead and 12 injured, according toaprevious report from the police and the Guayas provincial government.
The police said that the clashes were the result ofapower struggle between groups linked to drug trafficking.
Ecuadorian President Guillermo Lasso reported on Twitter that he has convenedasecurity committee to analyze the situation.
Clashes between rival gangs are frequent in Ecuadorian prisons and have caused more than 300 deaths so far this year, according to police reports.
The Litoral Penitentiary in Guayaquil was the scene of another revolt on Sept. 29 in which 118 prisoners died. It is considered the worst prison riot to have occurred in the country’s history. This event led the president to decreeastate of emergency for 60 days in the country’s prison system to stop the wave of violence.
Photo-People gather outside the Litoral Penitentiary waiting to receive information about their relatives afterariot in Guayaquil, Ecuador. (Photo by Marcos Pin/Xinhua)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ဗလီအတွင်း ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု တွင် ၃ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ